प्रियंका चोपडा र निक जोनसबीच डिभोर्सको तयारी ! सेलिब्रेटीको किन टुट्छ सम्बन्ध ?
अमेरिकी मिडियाले विवाह भएको चार महिनामै बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र अमेरिकी गायक निक जोनसबीच डिभोर्सको तयारी भएको दावी गरेका छन् । अमेरिकी म्यागजिन ओके सहित अन्य केही अनलाईनले निक र प्रियंका डिभोर्सको तयारीमा नै...
बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपुरले नेपाली युवक रोहन श्रेष्ठसँग बिवाह गर्ने भएकी छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका समाचार अनुसार उनी लामो समयदेखि रोहनसँग प्रेमसम्बन्धमा थिइन् । शक्ति कपुरकी छोरी श्रद्धाले विवाहका लागि परिवारको समेत अनुमति...
अभिनेत्री प्रियंका चोपडा भारत फर्किएकी छिन् । हलिउड गायक तथा अभिनेता निक जोन्ससँग बिहे गरेपछि केही समय पतिको घरमा रहेकी उनी हालै भारत फर्किएकी हुन् । पति निक र उनको परिवारसँग धुमधाम गरेर भारत फर्किएपछि...
बलिउडका महँगा बिहे: यी तीन जाेडिकाे चर्चा
विश्वमा चर्चित स्टारहरू खाने बस्ने देखि विवाह सम्मकाे बढि नै चर्चा हुने गरेकेा छ । कस्ले कति खर्च गरेर विवाह गरे ? कस्काे कति महङ्गाे कपडा लगाए ? यस्ता कुराकाे चर्चा मात्र हैन समाचार...
अमेरिकी गायक निक जोनसको प्रेममा रहेकी बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको विहे मिति तय भएको छ। प्रियंका र निकको विहे डिसेम्बर २ मा हुने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। विहे जोधपुरमा ३ दिनसम्म चल्ने बताइएको छ।...
हत्या गर्ने धम्की पछि इराकी सुन्दरीले देश छोडिन
मिस ईराक तथा मोडल सिमा कासिमले आफूलाई मार्ने धम्की आएको र ज्यानको असुरक्षा बढेका कारण देश छाडेर जोर्डनमा शरण लिएको बताएकी छन् । पश्चिमा शैलीको जीवन जीउने केही महिलाहरुको ईराकमा यस अघि पनि हत्या हुदै...
एजेन्सी । ‘धेरै सेक्सी’ भएको भन्दै एक २४ वर्षीया कम्बोडियन नायिकालाई संस्कृति मन्त्रालयले नै एक वर्षसम्म फिल्म खेल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । थुप्रै फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी नायिका डेनी क्वानले नियम तोडेको भन्दै संस्कृति मन्त्रालयले फिल्म खेल्न...
एजेन्सी । भारतीय टेलिभिजन शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’मा डाक्टर हंसराज हात्तीक भूमिका निर्वाह गर्ने कलकार कवि कुमार आजादको निधन भएको छ। कलाकार कवि कुमार आजादको मृत्यु हृदयघातका कारण भएको हो । केही दिन पहिले...
२० जेठ,काठमाडौँ । पटक पटक विवाद आउने भारतीय कलाकार सलमान खान फेरि विवादमा आएका छन् । उनको भारतका विभिन्न स्थानमा सलमानको पुत्ला जलाइएको छ । सलमानले हिन्द्रहरुको अपमान गरेको भन्दै विरोध भएको छ । सलमान...